My 6th. brother SMAR Nyi Nyi’s songs | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« အာဖဂန်မှာ ရုပ်ပွားတော် ဖျက်တာ မြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေလား ?
ကို ဗလကြီး – ကျုပ်လေ့လာမိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ »
ဒီသီချင်းလေးကိုတိတ်ခွေထဲထည့်ဖို.ရေးပေးပြီး ဆိုမည့်သူတွေကိုလဲအသံထွက်တွေပြင်ပေးရတယ်။ဒီသီချင်းမှာ ပြဿနာမရှိပါဘူး။စစ်ချီသီချင်းတပုဒ်မှာသာစာသားပြောင်းခိုင်းလို.ပြဿနာတက်လာပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်း မဆလ ထောက်လှမ်းရေးဆိုသူတွေရှုံးတာပေါ.။ အဲဒီသီချင်းက “နွေပင်လယ် ပူပူလောင် ငရဲမီးလျှံများ လွှမ်းပါစေ ရွ.ံကြောက်ဖို.မဖြစ်ပြီလေ ငရဲကောင်ရဲ.မာန်စွယ်ကို …နင်းခြေလို.ခြွေမယ်…လာပြီ ဇာနည် …. ညီ အကိုတွေ ” အဲဒီမှာ သူတို.က ပူပူလောင်ကို ပူလောင်လောင်လို.ပြင်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်က အဲဒီ ဝါဒဖြန်.ချီရေးတာဝန်ခံ စောမြအောင်ကို “ပူပူလောင်ကသိပ်ပူပါတယ် မခံမရပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါ ပူလောင်လောင် ဆိုတာက တအားပေါ.သွားတယ် ခွန်အားရှိတဲ့စာမဟုတ်ဘူး ဘာညာနဲ.ပြောတော့ “သူကပြန်ပြောတယ်….. “မင်းတို. Spy တွေသိပ်လျှာရှည်တယ်..မသတ်ပဲထားတာအေးအေးမနေဘူး …ဒီစကားလုံးကို ငါပြင်ချင်လို.ပြင်တာကွာ မင်းဘာလုပ်ချင်လဲ မင်းထပ်စကားမများနဲ. သေသွားလီမ့်မယ်” ဆိုပြီးပြန်ပြောတယ်။ ဒီသီချင်း ၆ ပုဒ်ပြီးတော့ခွေကြမ်းကို သံချောင်းကိုအပ်လိုက်တော့ ထုံးစံအတိုင်းကျောင်းသားအဖွဲ.ကထောက်လှမ်းရေးဆိုတဲ့သူတွေ ကိုပြတယ်။အဲဒီအထဲက အောင်စိုးမြင့်က ကျွန်တော်တို.တဲကိုရောက်လာပြီး “ခင်ဗျားတို. မဆလ ဗိုလ်တွေ တအားတော်တယ်ဗျာ..သီချင်း ၆ ပုဒ်ကိုဘာမှမကြာဘူး….ကျွန်တော်တို.လုပ်နေတာတအားခက်နေတာ…. အေးလေ အဲဒီလိုတော်လို.လည်း စပိုင်လုပ်ဖို. AB ထဲရောက်လာတာပေါ.” တဲ့။ နောက်တယောက်ကတော့ လက်သီးပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ဗန်းမော်က ဇော်ဝင်းချစ်ရဲ. ပေါင်သားကိုလှီးစားတဲ့အထဲပါတဲ့သူပေါ.။ကျွန်တော်တို. အကျယ်ချုပ်မဖြစ်ခင်ကျနော်တောင်ကုန်းပေါ်မှာထင်းခွဲနေတော့ထင်းကအမြက်ခံနေတာခွဲရတာအဆင်မပြေဘူး..အဲဒါကိုမြင်ပြီး သူပေးတဲ့ မှတ်ချက်လေးကိုကြည့်ပါအုံး..”ဟေ့ကောင်..ညီညီ ..မင်းဘဝအတွက် ငါရင် လေးတယ်ကွာ..နှီးလည်းမဖျာတက်…ကတ်လည်းမယက်တက်….ထင်းလည်းမခွေတက်……မင်းရှေ.လျှောက် ဘယ်လိုရပ်တည်မလဲ…” တကယ်ကိုသနားပြီးပြောသွားတာပါဗျာ…ဒါတွေကသီချင်းတွေအကြောင်းနဲ.အတူ သူတို.ရဲ.စိတ်ဓါတ်နဲ.အဆင့်အတန်းကိုသိရအောင်ရေးပြတာပါဗျာ…… သစ္စာတရားဖြင့် (ဆမား) ညီညီ မြေက်ပိုင်းရဲထော်ဟောင်း
This entry was posted on May 18, 2012 at 6:52 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.